सर्जियो अगुएरोलाई मेस्सिको भावुक संदेश
Optimus Prime December 16, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| अगुएरो गत समरमा बार्सिलोना गएका थिए, आफ्नो उत्कृष्ट साथि मेस्सी संग खेल्ने आशाका साथ।
तर सम्झौताको समस्याले ब्लाउग्रानाको सर्बकालिन कीर्तिमानि गोलकर्ता मेस्सीले पेरिस सेन्ट-जर्मेनका लागि क्लब छाडेका थिए।
यसै साता खेलजीवन बाट सन्यास लिएका आफ्नो हितैषीका लागि मेस्सिले भावुक सन्देश लेखेका छन् सामाजिक सन्जालमा।
अगुएरोका लागि आफ्नो सन्देशमा, मेस्सीले उनीहरू आँफुहरु कसरि घनिष्ठ साथी बनेका छन् र अर्जेन्टिनासँग कोपा अमेरिका जित्ने जस्ता केही राम्रा पलहरू पिचमा बिताएका छन् भनेर प्रकाश पारेका छन्।
“व्यावहारिक रूपमा पूरै करियर सँगै, हामीले केही उत्कृष्ट क्षणहरू बिताएका छौं संगै अरूहरू जुन त्यति उत्कृष्ट थिएनन्, तर ती सबैले हामीलाई नजिक बनाउन र असल साथीहरू बनाइदिएको छ। र हामी एक अर्का संग समय बिताउन जारी राख्नेछौं।” मेस्सीले इन्स्टाग्राम पोस्टमा लेखे।
“केही समय अघि कोपा अमेरिका जितेको ठूलो खुशीको साथ संगै तिमीले इङ्गल्याण्डमा प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरू सहित … सत्य यो हो कि तिमीले सबैभन्दा बढी माया गरेको कुरा अब टाढिएको देख्दा धेरै दुख लाग्छ। धेरै जसो तिमीलाई के भयो त्यसको कारणले।”
म पक्का छु कि तिमी खुसी रहनेछौ किनकि तिमी खुसी फैलाउने मान्छे हौ र हामी मध्ये तिमीलाई माया गर्नेहरु तिम्रो लागि हुनेछन्।
अब तिम्रो जीवनको नयाँ चरण सुरु हुँदैछ र म म विश्वस्त छु कि तिमीले आफ्नो अनुहारमा मुस्कान र सबै कुरामा राखेका सबै उत्साहका साथ यसको आनन्द लिनेछौ।”
“यो नयाँ चरणमा सबैलाई शुभकामना! म तिमीलाई धेरै माया गर्छु मेरो साथी, म तिमीसँग पिचमा र राष्ट्रिय टोलीसँग भेट्दा म धेरै मिस गर्नेछु।”
अगुएरोले कार्डियक एरिथमियाबाट पीडित हुनु अघि बार्सिलोनाका पाँच खेलमा मात्र खेल्न सक्षम भएका थिए।
Posted in मुख्य खबरTagged #aguero #hamro nepal sports #lionel messi #Messi
महादेशीय च्याम्पियन अर्जेन्टिना र इटालीले "फिनालिसिमा" खेल्ने
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| युरो २०२० बिजेता इटाली र कोपा अमेरिका बिजेता अर्जेन्टिना आउँदो जुनमा “फाइनालिसिमा” भनेर चिनिने खेलमा भिड्ने भएका छन्। रसिया २०१८ का लागि छनोट हुन नसकेपछि इटालीले इंग्ल्यान्डलाई फाइनलमा हराउदै शानदार पुनरागमन गरेको थियो। लियोनल मेस्सिले ब्राजिललाई पराजित गर्दै अन्तत: आफैंलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेका थिए। अर्जेन्टिनाको सफलताले […]
कसले पाउलान त युसिएल गोल्डेन बुट, यस्तो छ समिक्षा !!
मैत्रीपुर्ण खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड हाबीहुदा एभर्टनको लज्जास्पद हार !!
युवा खेलाडी रोहित पौडेलको शानदार प्रदर्शन, पिएनजीलाई मध्यम स्कोरको चुनौती
ए बि डि भिल्लार्सले यस पटकको एवेरेस्ट प्रेमिएर लिग खेल्ने !!
धवनको कप्तानीमा भारतलाइ शृंखला, अन्तिम खेलमा श्रीलंकासामु भारत स्तब्ध !!